🥇 La xisaabtanka kharashaadka iyo wax soo saarka xoolaha
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 794
Fiidiyowga xisaabinta kharashka iyo wax soo saarka xoolaha
Dalbo xisaabinta kharashaadka iyo wax soo saarka xoolaha
Xisaabinta kharashaadka iyo waxsoosaarka waxsoosaarka xoolaha waxaa loo fuliyaa iyadoo la raacayo foomamka la oggolaaday ee heerarka dukumiintiyada. Dukumiintiyadu way ka duwan yihiin waxaana jira noocyo badan oo iyaga ka mid ah, waa in la ogaadaa. Iyaga oo ku saleysan, gelitaannada waxaa lagu sameeyaa diiwaanka xisaabaadka. Shirkad weyn oo casri ah, dukumiintiyadan iyo diiwaangelintan, inta badan, waxaa lagu hayaa qaab dijitaal ah. Xisaabinta kharashaadka ku baxa wax soo saarka xoolaha, waxaa jira saddex qaybood oo waaweyn. Midka hore waxa ku jira kharashka wax soo saarka xoolaha, waxsoosaarka xoolaha ee nus dhamaadka ah, dhalidda quudka, iyo alaabada la isticmaalo, kuwaas oo si buuxda loogu isticmaalay hawlaha wax soo saarka. Kharashaadka noocan ah waxaa lagu daraa nidaamka xisaabinta sida ku cad dukumiintiyada kala duwan, iyo qaansheegta. Ta labaad waxaa ku jira kharashka qalabka shaqada, sida qalabka xisaabinta, aaladaha farsamada, oo lagu soo bandhigo dukumintiyada xisaabinta sidoo kale. Ugu dambeyntiina, shirkaddu waxay fulisaa xisaabinta iyo maaraynta kharashyada shaqada iyadoo la raacayo waqtiga shaqada, mushahar bixinta, amarrada kala duwan ee shaqada, iyo shaqaalaha. Dukumiintiyada xisaabinta iyo maareynta waxsoosaarka xoolaha ayaa waxaa ka mid ah joornaalada wax soo saarka caanaha, faraca xoolaha, ficillada ku saabsan wareejinta xoolaha ee da 'kale, ka bixida gawraca ama dhimashada darteed.
Waxaa suurtagal ah in beeraha yar yar diiwaanadan oo dhan wali lagu hayo warqad. Si kastaba ha noqotee, dhismayaasha waaweyn ee xoolaha, halkaas oo xooluhu ka kooban yihiin boqolaal xayawaan, khadad farsamo oo loogu talagalay caanaha iyo qaybinta quudinta, ka shaqeynta alaabta ceyriinka ah, iyo soo saarista hilibka iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo ayaa la isticmaalaa, nidaam kumbuyuutar xakameeya ayaa muhiim u ah socodka shaqo ee aan kala go’a lahayn.
USU Software waa badeecad gaar ah oo buuxisa dhammaan shuruudaha looga baahan yahay barnaamijka xisaabinta wax soo saarka xoolaha. Shirkadaha xoolaha nooc kasta ha lahaadeene iyo takhasuskoodaba, sida warshadaha taranka, shirkadaha yar yar, naaxinta beeraha, dhismooyinka waaweyn ee wax soosaarka, iwm way siman karaan, waxayna si guul leh u isticmaali karaan barnaamij si wada jir ah u bixiya xisaabinta dhibco badan oo kantarool ah Xisaabinta kharashaadka iyo waxsoosaarka waxsoosaarka xoolaha waxaa loo hayn karaa labadaba si gooni gooni ah qayb kasta, sida goobta tijaabada, lo'da, khadka wax soo saarka, iwm, iyo foomka guud ee shirkadda guud ahaan. Isku xirnaanta adeegsadaha ee barnaamijka 'USU Software' waa mid si wanaagsan loo abaabulay isla markaana aan dhibaato u keenin hannaanka hanashada. Muunado iyo tusaalooyin dukumiintiyo loogu talagalay xisaabinta kharashyada wax soo saarka iyo dhalidda alaabooyinka dhammaaday, foomamka xisaabinta, iyo miisaska waxaa soo saaray naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah.
Warqad-faafiyeyaasha barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameyso qiyaasta qiimaha nooc kasta oo badeecad ah, si otomaatig ah dib loogu xisaabiyo haddii ay isbeddelaan qiimaha alaabta ceyriinka ah, badeecadaha nus-dhammaadka ah, iwm. Amarada bixinta cuntada, xogta ku saabsan wax soo saarka ee khadadka wax soo saarka, warbixinnada keydka bakhaarka, iwm. waxaa lagu uruuriyaa hal keyd dhexe. Iyadoo la adeegsanayo macluumaadka tirakoobka ee la ururiyey, khubarada shirkaddu waxay xisaabin karaan heerarka isticmaalka alaabta ceyriinka ah, quudinta, alaabada nus-dhamaadka ah, dheelitirka saamiyada, qorsheynta shaqada adeegga bixinta iyo khadadka wax soo saarka. Xogta soo saarista waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu horumariyo laguna hagaajiyo qorshayaasha wax soo saarka, isu soo uruurinta amarrada loona gaarsiiyo macaamiisha, iwm. Qalabka xisaabinta ee la dhisay ayaa u oggolaanaya maamulka beerta in ay si dhakhso leh u helaan macluumaadka ku saabsan risiidhada lacagta, kharashyada degdegga ah, degsiimooyinka alaab-qeybiyeyaasha iyo miisaaniyadda , dhaqdhaqaaqa dakhliga iyo kharashaadka muddo cayiman, iwm.
Barnaamijka USU wuxuu bixiyaa otomatiga hawl maalmeedka iyo xisaabinta shirkadda xayawaanka, hagaajinta kharashyada, iyo dhimista kharashaadka hawlgalka ee saameeya qiimaha qiimaha, kordhinta faa'iidada ganacsiga guud ahaan. Xisaabinta kharashyada iyo waxsoosaarka waxsoosaarka xoolaha ee ku dhex jira barnaamijka USU Software waxaa lagu fuliyaa iyadoo loo eegayo foomamka dukumiintiyada loo oggolaaday wershadaha iyo iyadoo la raacayo xeerarka xisaabaadka. Barnaamijku wuxuu buuxiyaa dhammaan shuruudaha sharciga xukumaya xannaanada xoolaha qaarkood, iyo sidoo kale heerarka IT-ga casriga ah.
Dejinta waxaa la sameeyaa iyadoo la tixgelinayo waxyaabaha gaarka ah ee macaamiisha, caadooyinka gudaha, iyo mabaadi'da shirkadda. Kharashaadka soo noqnoqda ayaa lagu xisaabiyaa oo loogu dhejiyaa waxyaabaha xisaabaadka si otomaatig ah. Waxsoosaarka alaabooyinka la dhammeeyay ayaa la duubay maalin kasta sida ku cad dukumiintiyada aasaasiga ah. Dhowr goobood oo koontarool ah oo barnaamijku ku diiwaangeliyo kharashaadka iyo waxsoosaarka waxsoosaarka xoolaha ayaan saameyn ku yeelan waxtarka nidaamka.
Qiyaasta qiyaasta tooska loo xisaabiyo ayaa loo dejiyey shey kasta. Haddii ay dhacdo isbeddel ku yimaada qiimaha alaabta ceyriinka ah, alaabada nus-dhammaadka ah, quudinta, iwm sababo la xiriira kororka qiimaha iibka, ama sababo kale, xisaabinta waxaa dib loogu xisaabinayaa barnaamijka si madax-bannaan. Foomka la dhisay wuxuu xisaabiyaa qiimaha wax soo saarka marka laga baxo goobaha wax soo saarka. Amarada wax soo saarka xoolaha ee beerta waxaa lagu kaydiyaa hal xog-ururin.
Hawlgallada bakhaarrada waa la hagaajiyaa sababtoo ah isdhexgalka aaladaha farsamada ee kala duwan, sida aaladaha koodhka baararka, miisaanka elektarooniga ah, boosteejooyinka xog ururinta, iwm. kharashka iyo burburka ka yimaada badeecadaha dhacay, soo gelinta warbixinnada hadhaaga hadda socda. Aaladda otomaatiga ah ee geeddi-socodka ganacsiga iyo xisaabintu waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u qorsheyso shaqada adeegga soo-saarka iyo wax-soo-saarka, go'aamiso heerarka isticmaalka ee alaabta ceeriin, quudinta, iyo agabka, diyaarso amarrada iyo horumarinta jidadka gaadiidka ee ugu habboon marka badeecooyinka loo geeyo macaamiisha.
Sameynta iyo daabacaadda dukumiintiyada caadiga ah, xaashiyaha kharashka, joornaalada bixitaanka, foomamka dalabka, qaansheegadka, iwm. Waxaa si toos ah ugu fuliya nidaamka. Jadwalka dhismaha ku jira wuxuu siiyaa awooda barnaamiyada barnaamijka iyo shuruudaha diyaarinta warbixinada gorfaynta dejisa inta jeer ee keyd, iwm. Qalabka xisaabaadka wuxuu hubiyaa helitaanka warbixinada hawlgalka ee helitaanka lacagaha, dejinta la leh alaab-qeybiyeyaasha, bixinta miisaaniyadda, qor- kharashka hadda jira, iwm.